Ny tantara tantara an-tsehatra tsara indrindra
Famerenana tantara an-tsary mampatahotra
Blue Sky, nataon'i Daria Bignardi
Efa elaela izay no nandaozan'ny ratram-po ny fitiavan-tena ka nanao fotoana tany amin'ny mpitsabo aretin-tsaina, toy ny zanaky ny mpiara-monina rehetra. Ny fitantarana fa ny ratram-po manta dia manana endrika hafa eo am-pelatanan'i Daria Bignardi. Satria momba ny fanalana ny fahoriana izay avelany ao anatin'ny mangingina mangatsiaka eo anoloan'ny Universe iray izay…
Volana feno, nataon'i Aki Shimazaki
Ny fanoratana momba ny fitiavana dia manana fiheverana manokana ao amin'i Aki Shimazaki, tselatra misy izay manomboka amin'ny fahabangana amin'ny ratram-po ka hatramin'ny lohataona tsy mety ritra tsy mety levona amin'ny fitiavan-tena. Rano mikoriana mifanindran-dalana ary mampifoha ny fahatsapana mitovy amin'ny tsy misy na aiza na aiza raha vantany vao ritra ny zava-pisotro farany. Anisan'ny…
Tantara Shuggie Bain avy amin'i Douglas Stuart
"Ny maherifo dia izay rehetra manao izay azony atao," hoy i Romain Roilland nanamarika tamin'ny fahendrena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Saingy kely ny heverintsika fa azon'ny ankizy atao mba hamerenana ny fahazazany. Satria tsy voajanahary ny fahaverezana razambe iray nefa very ray aman-dreny ...
Ny herin'ny alika, ny Thomas Savage
Tantara momba Thomas Savage teraka tamin'ny 1967 izay tonga eto amintsika ankehitriny miaraka amin'ny herisetra hafahafa amin'ireo horohorontany tsy nampoizina indrindra. Taloha dia mety ho toy ny tantaran'ny Etazonia lalina izy io, ankehitriny dia hita indray ho toy ny fitantarana akaiky mahery vaika, farafaharatsiny hatrany am-piandohana, izay mandalina an'io hevitra io momba ny ...
Boky tsy maintsy vakiana alohan'ny hahafatesanao
Inona no titre somary mihatsaravelatsihy kokoa noho ity? Alohan'ny hahafatesanao, eny, ora vitsivitsy monja alohan'ny hihainoana azy, dia haka ny lisitry ny boky tena ilaina ianao ary hiampita ilay mpivarotra tsara indrindra nataon'i Belén Esteban izay manidy ny faribolana mamaky ny fiainanao… ary vazivazy ra) Tsy latsa-danja izany…
The Restlessness of the Night, nataon'i Marieke Lucas Rijneveld
Ny zavatra ratsy indrindra dia ireo izay mitranga tsy amin'ny fotoana. Tsy misy fotoana mety ho an'ny veloma aloha. Na eo aza izany, ny zava-dratsy indrindra dia misy, miaraka amin'io filaharana manjavozavo io izay tsy azo hazavaina amin'ny sain'ny olombelona na dia eo aza ny fiezahana mampifandray azy amin'ny karazana famoizan-tena mialoha ny valisoa na ...
Soritry ny fahanginana, nataon'i John Boyne
Ny anjaran'ny mpanoratra tsirairay dia tokony hanoratra ny sangan'asany tsara indrindra fotoana fohy alohan'ny handaozany ny lampihazo, na amin'ny fialana amin'ny tontolon'ny literatiora na amin'ny fahafatesana. Masiaka nefa marina. Satria mahita tranga toa an'i John Boyne isika taty aoriana, tsy afaka nibolisatra ny zanany ...
Ny renin'i Frankstein, avy any Almudena Grandes
Mahaliana ahy foana ny etimolojia amin'ny teny hysteria. Satria avy any am-bohoka amin'ny teny grika. Ary noho izany dia manaraka mora foana ny fiarahana mora sy maharikoriko an'ny vehivavy amin'ny natiora. Aberrant. Almudena Grandes Ao amin'ity tantara ity dia mijery vehivavy ara-tsaina manokana izay nisy tao amin'ny ...